UNFPA Myanmar | Call for Expressions of Interest (EOI) to partner with UNFPA (Myanmar) through the CSO Grant (2022)
Call for Expressions of Interest (EOI) to partner with UNFPA (Myanmar) through the CSO Grant (2022)
letter_of_call_for_expression_of_interest_eoi_2022.pdf, call_for_expression_of_interest_for_grants_to_csos_eng_2022.pdf, call_for_expression_of_interest_for_grants_to_csos_myn_2022.pdf
Expression of Interest No: 001/2022
Issuance Date: April 25, 2022
SUBJECT: Call for Expressions of Interest (EOI) to partner with UNFPA (Myanmar) through the CSO Grant (2022)
The United Nations Population Fund (UNFPA) Myanmar Office is seeking Expressions of Interest from community based organizations (CBOs)/civil society organizations (CSOs)/ Women's Organizations from Myanmar to respond to emergency needs of women, girls, young people and other populations to ensure their safety, dignity, and well-being.
The CSO Grant aims to increase accessibility of Sexual and Reproductive Health (SRH) and Gender Based Violence (GBV) services and to respond to emergency needs of vulnerable populations, including women and girls and young people in Myanmar.
Total Grant Amount & Duration:
An organization can each apply foramaximum of 25,000 USD. Grant is expected to be spent before November 30, 2022.
Application must be submitted via - eoi.myanmar@unfpa.org - only.
Please, also refer to the attached EOI documents (English & Myanmar) for details of requirements such as eligibility, areas of support, deadline, and more.
For enquiries, please contact Mr. Yee Htet (Sam) at yhtet@unfpa.org (09-784 034993). Thank you.
အကြောင်းအရာ ။ ။ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ရန်ပုံငွေများပေးအပ်မည့်အစီအစဥ်အတွက် စိတ်ပါဝင်စား သောအဖွဲ့ များအားလျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
UNFPA (မြန်မာ) မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရန်ပုံငွေများပေးအပ်မည့် အစီအစဥ်အတွက် လျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ၄င်းရန်ပုံငွေအစီအစဥ်သည် လက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်း အရေးပေါ်ကာလ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များ၊ လူငယ်များနှင့် အခြားထိခိုက်လွယ်ကူသော လူအုပ်စုများ၏ လုံခြုံရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် သာယာဝပြောရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ထိုရန်ပုံငွေမှတဆင့် အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များ၊ လူငယ်များနှင့် အခြားထိရှလွယ်သော လူအုပ်စုများအတွက် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး၊ ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် သွားရန် ရည်ရွယ်သည်။
ရန်ပုံငွေနှင့် ကာလကြာချိန်၊၊ ၊၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅,၀၀၀ (အများဆုံး) လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ထိုရန်ပုံငွေအား ၃၀ ရက်နေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မကုန်မှီ အပြီးသုံးစွဲရမည် ဖြစ်သည်။
မိမိအဖွဲ့၏ အဆိုပြုလွှာအား eoi.myanmar@unfpa.org သို့သာ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ပူးတွဲပါစာမျက်နှာများတွင်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မည့်သူ - ကိုရည်ထက် ၊ yhtet@unfpa.org (09-784 034993))။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။